Tsamba Yekutanga kuvaKorinde 2:1-16
Kuparidza kwaPauro muKorinde (1-5)
Kukwirira kwakaita uchenjeri hwaMwari (6-10)
Kusiyana kwakaita munhu wemweya nemunhu wenyama (11-16)
2 Saka pandakauya kwamuri hama, ndichikuzivisai chakavanzika chitsvene*+ chaMwari, handina kuuya ndichishandisa mashoko+ kana uchenjeri zvekushamisira. 2 Nekuti ndakasarudza kusaziva chimwe chinhu pakati penyu kunze kwaJesu Kristu, akarovererwa.+ 3 Uye ndakauya kwamuri ndisina simba, ndichitya uye ndichidedera zvikuru; 4 uye zvandaitaura nezvandaiparidza zvakanga zvisina mashoko ekunyengetedza euchenjeri asi kuti zvairatidza mweya nesimba,+ 5 kuti kutenda kwenyu kuve musimba raMwari, kwete muuchenjeri hwevanhu. 6 Tinotaura uchenjeri pakati pevaya vakura,+ kwete uchenjeri hwenyika ino kana hwevatongi venyika ino, vari kufanira kuparara.+ 7 Asi tinotaura uchenjeri hwaMwari muchakavanzika chitsvene,+ uchenjeri hwakavanzwa, hwakagara hwaitwa kuti huvepo naMwari nyika ino yakaipa isati yavapo, kuti isu tikudzwe. 8 Uhwu ndihwo uchenjeri hwakatadza kuzivikanwa+ kana nemumwe wevatongi venyika ino, nekuti dai vakanga vahuziva vangadai vasina kuroverera Ishe anokudzwa. 9 Asi sekunyorwa kwazvakaitwa kuti: “Ziso harina kuona, nenzeve haina kunzwa, uye mwoyo wemunhu hauna kufunga nezvezvinhu zvakagadzirirwa naMwari vaya vanomuda.”+ 10 Nekuti isu ndisu takazvizarurirwa+ naMwari achishandisa mweya wake,+ nekuti mweya unoongorora zvinhu zvese, kunyange zvinhu zvakadzama zvaMwari.+ 11 Nekuti pakati pevanhu ndiani anoziva zvinhu zvemunhu, kunze kwemweya* wemunhu uri maari? Sakawo, hapana akasvika pakuziva zvinhu zvaMwari, kunze kwemweya waMwari. 12 Zvino isu hatina kugamuchira mweya wenyika asi mweya unobva kuna Mwari,+ kuti tizive zvinhu zvatakapiwa naMwari nemutsa wake. 13 Tinotaurawo zvinhu izvi, kwete nemashoko anodzidziswa neuchenjeri hwevanhu,+ asi neaya anodzidziswa nemweya,+ tichitsanangura zvinhu zvemweya tichishandisa mashoko emweya. 14 Asi munhu wenyama haabvumi zvinhu zvemweya waMwari, nekuti upenzi kwaari; uye haagoni kusvika pakuzviziva, nekuti zvinoongororwa mumweya. 15 Asi munhu wemweya anoongorora zvinhu zvese,+ asi iye haaongororwi nemunhu. 16 Nekuti “ndiani akasvika pakuziva pfungwa dzaJehovha,* zvekuti angamurayiridza?”+ Asi isu tine pfungwa dzaKristu.+